Chii chinonzi Kudonhedza? - Kudonhedza kubva pasirese kusvika pasirese
Kudonhedza ibhizimusi modhi apo Mutengesi haambozadzise maodha nemaoko uye panzvimbo pezvo anoshanda Mutengesi kutumira zvigadzirwa panzvimbo yavo. Chaizvoizvo Mutengesi anoita se "munhu wepakati," achigara achinyora zvinhu pawebhusaiti yavo pamuganhu unobatsira iye achitenga zvakataurwa kubva kuMutengesi nemutengo unodhura. Izvo zvinowanzoitika ndeye Dropshipper ichavaka eCommerce saiti uye inonyora zvese zvigadzirwa zvavanowana. Zvino kana vagamuchira kutenga, vaitendeuka votenga chigadzirwa, nemari yavo, vonyora zvitupa zvevatengi vavo sekero yekutumira. Zvino kana mutengi agamuchira odha yake, vaizodzoreredzwa nePayment Gateway yavakaisa pawebhusaiti yavo.
Mune mamwe mazwi, iri fomu nyowani yekushambadzira kwealbatross, uko iwe seDropshipper unotora maodha kubva kune vatengi vepamhepo, tenga zvinhu kubva kuMutengesi, wozozvitumira zvakanangana neMutengi pasina kubata kana kubata stock. Zvese zvikumbiro zvinogutsikana uye zvinotakurwa zvakananga kubva kune yekutengesa, senge CJ Kudonhedza. Izvi zvinokugonesa iwe Dropshipper kuti utarise zvakanyanya pakuvaka yako brand, kushambadzira, uye kutyaira kutengesa.
Nekudaro, kudonhedza pasi kunokupa iwe nzira yekutanga bhizinesi nemutengo wakaderera. Kukupa iwe kugona kukwirisa kambani kubva pasi kumusoro nediki kune isina njodzi. Izvo zvinokwanisika kuvaka humambo nechinhu chimwe chete chinokunda chigadzirwa. Iwe haufanire kudhonza chikwereti uye upinde muchikwereti chekutenga zvinyorwa, kungo gadzirisa nehukuru hwepamusoro nekuti zvikamu hazvina kutengesa. Haufanire kutarisana nemubhadharo wekurenda, manejimendi, uye kuchengetedza matura.
Mukupedzisa, Kudonhedza ndiyo nzira kwayo yekuti utange bhizinesi pabhajeti yakaderera. Makambani mazhinji akatanga bhizinesi ravo rewebhu neDropshipping, Amazon, Zappos, uye Wayfair kungodoma mashoma. Iyo eCommerce indasitiri iri kukura zvishoma nezvishoma nekuda kwekuti inobatsira. Mubvunzo chete waunofanirwa kuzvibvunza ndewekuti "ungangotanga sei bhizimusi rako nekukurumidza?"
Pane chero munhu anodonha pa eBay ane cjdropshipping? ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Ini ndakagadzira Yangu account pashopify uye paCJ kudonha.
Ndanyora Zvimwe Zvigadzirwa ipapo.
Saka Ndakawana Sei Kutengesa Kwangu?
Kubva kupi vanhu vanoshanyira chitoro changu ?? kubva kwandakawana kutengesa ???
ini ndoda kushambadza Chitoro Changu paFB kana instagram ?? Kana CJ/Shopify inozongopa Mutengi kana Kushambadza Chitoro changu ??
Ini ndiri wekutanga uye handizive kuti ndoita sei kuti ndiite Sales.?
#rubatsiro_post ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Ndakanga ndichangotanga chitoro changu chitsva cheEtsy uye ndaitsvaga mamwe mazano echigadzirwa & ndakaona kuti vanhu vazhinji vari kuyedza kuvaka chitoro chezvigadzirwa zvedhijitari kuti vadzivise matambudziko uye mari yekungoita. Saka ndinochera mukati mayo uye ndakaona kuti zvizhinji zvezvinhu zvedhijitari zvinotengeswa zvakaita se (Etsy Keywords List), Etsy Banners), (Etsy Shop Ideas) uye vari kutengesa zvakanaka kwazvo asi kune mutsva, hazvisi nyore kuita kutengesa. mariri. Saka ndakanyura zvakadzika ndikaona kuti kune mapendi ari kutengesa zvakanyanya kutenderedza $30-60 (Digital) & $150-$2000 ye (Yenyama). Ndakabva ndaonawo kuti mifananidzo mizhinji iripo ine chekuita nemamiriro ekunze, mhuka, kana mapatani saka panogona kuva nenzvimbo yemifananidzo yevanhu. Kuti isu tinokwanisa kuzviita digitaalinen kana mumuviri izvo zvatinosarudza zvakanakisa uye isu tinokwanisa outsource chigadzirwa kubva FIVERR!
Sezvo kune vatengesi vazhinji vanotengesa pendi yemafuta emunhu paFiverr chete $50-70 asi izvo zvakare zvinodhura zvakanyanya pakudonhedza paEtsy. Saka ini ndakawana mamwe magigs matsva anogona kushandiswa kune ichi chinangwa chinongedzo mune makomendi,
Ndedzipi pfungwa dzako pazviri? Uye kana mumwe munhu achida kuyedza izvi ivo vanogonawo.
[#etsy](www.facebook.com/hashtag/etsy?__eep__=6&__gid__=246084882591465&__cft__=AZWFRtOUFSyAnOhEnaojUTUDVdVc8u8WAnmCehdrc3zuxe4M00UgTLdk-ERAGb-pIcD2VCJHli-_Tt4MRO7AY5iZspnLrrP3Wgi9Lo8ntfzgBL4lLQ1zycPq6L-WDV9P8YA&__tn__=*NK-R) [#Fiverr](www.facebook.com/hashtag/fiverr?__eep__=6&__gid__=246084882591465&__cft__=AZWFRtOUFSyAnOhEnaojUTUDVdVc8u8WAnmCehdrc3zuxe4M00UgTLdk-ERAGb-pIcD2VCJHli-_Tt4MRO7AY5iZspnLrrP3Wgi9Lo8ntfzgBL4lLQ1zycPq6L-WDV9P8YA&__tn__=*NK-R) ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Ona zviri kutaurwa nevanhu nezve #Fiverr
Izvi zvirimo hazviwanike izvozvi
Kana izvi zvikaitika, zvinowanzoitika nekuti muridzi akangozvigovana neboka diki revanhu, vakachinja vanogona kuzviona kana kubviswa.
Kubva kwatinogona kudzidza online dropshipping kosi kuti tive nyanzvi ... Ona ZvimweOna Zvishoma
Tags cj kudonhedza, cjdropshipping, dropshipping, maitiro ekudonhedza pasi, maitiro ekuita mari pamhepo 2021, kutanga sei kudonhedza bhizinesi, kutanga sei kudonhedza, kuita mari paIndaneti, makemoneyonline, kudonhedza chii
← Kudonhedza Kunoshanda Sei? → Matipi Ehoridhe Ekudhinda-pa-Demand Chitoro